မေတ္တာအိမ်ပညာဒါန (အခမဲ့) စာသင်ကျောင်း ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ) ~ ဒီမိုဝေယံ
မေတ္တာအိမ်ပညာဒါန (အခမဲ့) စာသင်ကျောင်း ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မေတ္တာအိမ်ပညာဒါန (အခမဲ့) စာသင်ကျောင်း ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားအား ယနေ့ ၂ . ၁၀ . ၂၀၁၁၊ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၉ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ စုံလင်စွာ တတ်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဓာတ်ပုံ ပေးပို့လာတဲ့ ခမိခဆဲအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်...။